Kooxda Daacish oo Gowracday ninkii sadexaad soona Bandhigtay ninka xiga ee isna la Gowraci doono+sawiro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Kooxda Daacish oo Gowracday ninkii sadexaad soona Bandhigtay ninka xiga ee isna la Gowraci doono+sawiro
Xoogaga Islaamiyiinta Daacish ee ka Dagaalama Dalalka Ciraaq iyo Siiriya ayaa soo bandhigay Muuqaal Muujinaya iyaga oo qoorta ka jaraya Nin samafale ahaa oo u dhashay Dalka Inkiriiska kaa oo gacanta ugu jiray in mudo ah.
Ninka ay Gowraceen Kooxda Daacish ayaa lagu Magacaabaa Alan Henning., oo 47 sano jir ahaa, waxaana Kooxda Daacish ay ninkaan qafaasheen bishii December, ee sanadkii tagay, xilli uu ka mid ahaa koox darawalo ah oo kexeynaayay kolonyo gaadiid gargaar u siday Suuriya.
Xoogaga Daacish ayaa sidoo kale ku hanjabtay in ay dili doonaan muwaadin kale oo u dhashey Dalka Mareykanka kaa oo la sheegay in uu ka mid ahaa shaqaalaha gargaarka, waxaana ninkan magaciisa lagu sheegay eter Kassig.
Xaaska Ninkan la Gowracay ayaa todobaadkii lasoo dhaafay waxa ay codsi u dirtay kooxda Daacish oo ay uga codsanaysay in ninkeeda si shuruud la’aan lagu soo sii daayo.
Xoogaga Islaamiyiinta Daacish ayaa labadii bil ee ugu dambeesay waxa ay Gowraceen ilaa 4-nin oo isugu jira Wariyaal iyo Samafalayaal kuwaa oo u kala dhashay Dalalka Mareykanak iyo Ingiriiska.